कसैले तपाईलाई दुःख दिइरहेको छ ?, तपाईसँग पैसा मागेर फिर्ता गरिरहेको छैन ? त्यसो भए अपनाउनुस यस्तो तरीका - IAUA
कसैले तपाईलाई दुःख दिइरहेको छ ?, तपाईसँग पैसा मागेर फिर्ता गरिरहेको छैन ? त्यसो भए अपनाउनुस यस्तो तरीका
ramkrishna October 26, 2017	कसैले तपाईलाई दुःख दिइरहेको छ ?तपाईसँग पैसा मागेर फिर्ता गरिरहेको छैन ? त्यसो भए अपनाउनुस यस्तो तरीका
बिनाकारण तपाईलाई कसैले दुःख दिइरहेको छ, वा पैसा फिर्ता गरिरहेको छैन साथै कुनै मानिसबाट तपाईलाई समस्या भैरहेको छ भने नरिवलको यो सजिलो तरिका अपनाएमा दुश्मनबाट मुक्ति पाउन सकिन्छ। आउनुहोस यो तरिका थाहा पाइ राखौँ
-यो उपाय अपनाउनको लागि तपाईलाई एक बिना पानीको नरिवल लिनुपर्ने छ ।
-सिन्दुरको मसि बनाएर वा सिन्दुरलाई तेलमा घोलेर एक डन्डीको माध्यमले कुनै कुनामा शत्रुको नाम लेख्नुहोस ।
-यो नरिवललाई सात पटक आफ्नो सिर माथिबाट घडिको उल्टो दिशामा घुमाउनुहोस ।
-यसपछि नरिवललाई कुनै पुरानो भैरव वा काली मन्दिरमा राख्नुहोस र उनीसँग यस दुःखलाई हटाउन प्रार्थना गर्नुहोस ।
-यो उपाए कुनै पनि मंगलबार, शनिबार या औंसीको दिनमा गर्न सकिन्छ ।
-सात पटक नियमका साथ यो उपाय अपनाउनु भयो भने उसले तपाईको पैसा फिर्ता दिन्छ या तपाईलाई दुःख दिइरहेको छ भने दुःख दिन बन्द गर्छ ।
Previous Previous post: वास्तु शास्त्र अनुसार घरमा राखिने कुचो र धनको सम्बन्ध
Next Next post: what is cms (content management system) ?